कालिकाेटमा बाबुले लगाए आफ्नै घरमा आगो, दुई छोराको मृत्यु — Sanchar Kendra
१सर्वोच्चकाे बहसमा खैलाबैला मच्चिएपछि ओली सरकारले रातारात गर्यो यस्तो किर्ते काम, अब के गर्लान प्रधानन्यायाधिस जबरा ?
२महान्यायाधिवक्ता खरेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेस
३सवारी साधनको नयाँ लाइसेन्स बनाउन चाहनेहरुलाई खुसीको खबर, हट्यो कोटा प्रणाली
४प्रचण्ड-नेपाल समूहको आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन, क-कसले गर्दैछन सम्बोधन ?
५बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै, मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने
६खुलेको केहि दिनमै बन्द भए विद्यालयहरु, सामाजिक विकास मन्त्रीले गरे यस्तो अपील
७अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कति पाउनेछन् तलब, कस्ता हुनेछन् सुविधा-भत्ता ?
८२५ वर्षीय समृत खरेलले सर्वोच्चमा गरेकाे १५ मिनेट लामाे बहस सुनेर न्यायाधिश दंग, किन मागियाे लिखित भर्सन ?
९ओलीले पत्रकारलाई झपार्दै भने- तिमि हैन, तपाई लेख्नुहोस
१०सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेलको भिडियो प्रमाणका रूपमा पेस गर्न तयार छु- भट्टराई
११ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकाल्ने घोषणा
१२थप ३३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४ को मृत्यु
कालिकाेटमा बाबुले लगाए आफ्नै घरमा आगो, दुई छोराको मृत्यु
कालीकोट । कालीकोटमा बाबुले आफ्नै घरमा आगो लगाउँदा दुई छोराको मृत्यु भएको छ । एक छोरा घाइते भएका छन् ।
डीएसपी शाहका अनुसार आगोले जलेर मृत्यु हुनेमा उनका १२ वर्षीय छोरा गणेश बटाला र ७ वर्षीय मनबहादुर बटाला रहेका छन् । त्यस्तै अर्का ४ वर्षीय छोरा खगेन्द्र बटाला घाइते भएका छन् । घाइते खगेन्द्रको नरहरिनाथ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भैरहेको छ ।
अत्याधिक मदिरा सेवन गरेका भैरेले घरायसी झगडाका कारण बुधबार बिहान चारबजे बजेतिर आगो लगाएको डीएसपी शाहले बताए । उनले घर आगो लगाए लगतै विष सेवन गरेका थिए । उनी गम्भीर अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको उपचार भैहरको छ ।
उता हिमाली जिल्ला मनाङमा माइनस तापक्रम रहेका बेला पनि आगलागी भइरहेको छ । आगलागीले हालसम्म करिब ७ सय हेक्टर वन क्षेत्र सखाप भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
नासों गाउँपालिका–८ ताचैका सोलबहादुर गुरुङका अनुसार थान्चोक र कोतोको पारिपट्टि रहेको कोटेबाट आगलागी सुरु भएको हो । आगो अहिले रैंदु जंगलमा फैलिएको छ । ‘सुकेको पातपतिंगर र सालको काठमा आगो सल्किएको छ, निभाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आगोलाई गाउँतिर आउन नदिन अनेक उपाय लगाएका छौं । जंगल भने सखापै बनायो ।’
मंसिर ११ देखि आगलागी भइरहेको छ । आगलागी भइरहेको ठाउँ हिउँ पर्ने र जम्ने ठाउँ हो । तर यस वर्ष हिउँ खासै परेको छैन । एक साताअघि भ्राताङदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा मात्रै हिमपात भएको थियो । आगलागी भइरहेको ठाउँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ । एक्यापको धारापानी चेकपोस्टका पर्यटन सहायक क्षेत्र गुरुङका अनुसार आगलागी डरलाग्दो गरी फैलिएको छ । मर्स्याङ्दीको किनारदेखि पहाडको टुप्पोसम्म जंगल सखाप बनाएको छ ।
आगलागी फैलिएर ३ हजार ५ सय मिटर उचाइसम्म पुगेको छ । तर आगलागी भएको सबै ठाउँमा पुग्न भने नसकिएको बताउँछन् एक्याप लमजुङका प्रमुख लेखनाथ गौतम । ‘मनाङमा तापक्रम रातको समयमा माइनस छ । हामी बस्ने ३ हजार ५ सय मिटर उचाइमा रातमा माइनस १३/१४ डिग्री सेल्सियससम्म झर्छ,’ उनले भने, ‘सुकेको रूखमा सल्किएको आगो रातभरि रहने र भोलिपल्ट हावा चलेपछि फेरि सुरु हुँदो रहेछ ।’
उनका अनुसार हिउँ नपरेकाले जमिन सुक्खा छ । पातपतिंगर सुकेर झरेका छन् । शीत पनि नपर्दा मुढा/ठुटामा सल्किएको आगो माइनस डिग्रीमा पनि निभ्न नसकेको उनले बताए । ‘मंसिर ११ बाट सुरु भएकामा पुस १३ मा आगलागीले उग्ररूप लियो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा २ सयदेखि ३ सयवटा झारल, घोरलको बासस्थानलाई असर पुर्‍याएको देखिन्छ । बहुमूल्य जडीबुटी पनि सखाप बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ आगलागीबाट मानवीय क्षति भने नभएको उनले बताए ।
उक्त क्षेत्रमा घोरल, झारल, कस्तुरी, मृग, थार, हिमचितुवाजस्ता जनावर पाइने एक्यापले जनाएको छ । यार्चागुम्बु, पाँचऔंले, नीरमसी, कुटकी, पदमचाल, पाँचऔंले, वनलसुनलगायत जडीबुटीसमेत पाइन्छ । ‘कति वन्यजन्तु, वनपैदावार र जडीबुटीमा क्षति पुग्यो भन्ने त अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं, यकिन गर्न सकिएको छैन,’ एक्याप प्रमुख गौतमले भने । उनले आगो सल्काउनेको खोजी भइरहेको बताए ।
‘घाँस र च्याउ राम्रो आउँछ भनेर आगो लगाएको हुन सक्छ । सिकार गर्न पनि आगो लगाएको हुन सक्छ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय मिलेर आगो निभाउने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘हामी मुख्य बाटोबाट दुई–अढाई घण्टा हिँडेर आगलागी भएको ठाउँसम्म पुग्यौं । आगो नियन्त्रणमा लियौं । तर अर्को ठाउँमा आगो फैलिरहेको छ,’ उनले भने । उनले आगो अझै नियन्त्रण बाहिर रहेको बताए ।
आगलागी नियन्त्रणमा लिन ५ सय मिटर लामो र ३ मिटर चौडाइको अग्निरेखा बनाइएको छ । ‘आगोलाई मानव बस्तीमा आउन नदिन अग्निरेखा बनाएका छौं । टेलिफोनको टावरलाई सुरक्षित राखिएको छ । जंगली जनावर, काठदाउरा र जडीबुटी नाश भए । सायद बस्तीमा आउँदैन होला,’ उनको आकलन छ ।
उनले ठाडो भीरमा जान नसकिएको र त्यही ठाउँमा आगो फैलिरहेको बताए । आगो निभाउन ताचै गाउँका करिब ५५ घरधुरीका स्थानीय दैनिक खटिएका छन् । सेना, प्रहरी, एक्यापका कर्मचारी गरी दैनिक १ सयदेखि डेढ सय जना खटिरहेको प्रजिअ लामिछानेले बताए । आगो निभाउन बेल्चा, गैंची, आगो निभाउने साधन, स्याउलालगायत प्रयोग गरिएको छ ।